အမေ့ခံအတိတ် | Mere Piya Gaye Rangoon (ကျွန်မခင်ပွန်း ရန်ကုန်ကို သွားတယ်)
Mere Piya Gaye Rangoon (ကျွန်မခင်ပွန်း ရန်ကုန်ကို သွားတယ်) သီချင်းသည် အိန္ဒိယတွင် နာမည်အကျော်ကြားဆုံး သီချင်းများထဲမှ တစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်က အောင်မြင်ခဲ့သော “Patanga” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်သော သီချင်း ဖြစ်သည်။
တစ်ချိန်က ရန်ကုန်မြို့သည် အိန္ဒိယလူမျိုးများစွာအတွက် တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း ရှာဖွေနိုင်ရာ နေရာတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် နေထိုင်နေသော အိန္ဒိယ မိသားစုတစ်စုက ရန်ကုန်သည် ယင်းတို့အတွက် “ပထမဆုံး အမေရိကန်” ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော့်ကို ပြောပြဖူးသည်။
ဤသီချင်းတွင် ဇနီးသည်ဖြစ်သူက ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို လွမ်းဆွတ်လှကြောင်း တတွင်တွင် ပြောနေသည်။ ခင်ပွန်းသည်က သူခမျာ တစ်ကိုယ်တည်း အထီးကျန်၊ ဆင်းရဲပင်ပန်းပြီး အဆာငတ်ခံနေရကြောင်း ပြောပြသည်။ တကယ်တမ်းတော့ ထိုသို့ မဟုတ်ပါချေ။
စာသားများကို အောက်တွင် ဟင်ဒီ၊ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။
Hallo, hindustaan kaa deharaaduun?
ဟယ်လို ဒယ်ရာဒွန်း (အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ မြို့ငယ်တစ်ခု) ကလား
Hallo, Dehra Doon? (a town in India)
Main apanii bivii renukaa devii se baat karanaa chaahataa huun
ကျွန်တော့်ဇနီး ရေနုကာဒေဝီနဲ့ ပြောချင်ပါတယ်
i want to my speak to my wife, Renuka Devi
Mere piyaa; ho mere piyaa gaye Rangoon
ကျွန်မခင်ပွန်း အို ကျွန်မခင်ပွန်း ရန်ကုန်ကိုသွားတယ်
My husband, o my husband has gone to Rangoon
Kiyaa hai vahaan se telifuun
He has telephoned from there
ရှင့်ကို သတိရလို့ ကျွန်မမှာ စိတ်သောကရောက်ရပါတယ်
Your thoughts are tormenting me
Jiyaa mein aag lagaatii hai
ကျွန်မ နှလုံးသားတော့ လောင်ကျွမ်းနေရှာပြီ
Mere piyaa gaye ranguun
My husband has gone to Rangoon
Ham chhod ke hindustaan
After leaving india
i regretted much
Huii bhuul jo tumako saath na lekar aaye
မင်းကို အတူမခေါ်လာမိတာ ကိုယ်မှားတာပါပဲ
i madeamistake by not bringing you along with me
Ham barmaa kii galiyon main aur tum ho Dehra Doon
မြန်မာပြည်က လမ်းတွေပေါ် ကိုယ်က လျှောက်သွားနေပြီး မင်းကတော့ ဒယ်ရာဒွန်းမှာ ကျန်ခဲ့ရပြီ
I am in the streets of Burma and you are in Dehra Doon
မင်းကို သတိရလို့ ကိုယ့်မှာ စိတ်သောကရောက်ရပါတယ်
Merii bhuukh pyaas bhii kho gaye
My thirst and hunger are also lost
Gam ke maare
ဝမ်းနည်းမှုထဲမယ် ပျောက်ဆုံးလို့ နေပါတယ်
Main adhamuii sii ho gai gam ke maare
ဝမ်းနည်းမှုကြောင့် ကျွန်မမှာ သတိလက်လွတ် ဖြစ်ရပါတယ်
i am half conscious because of my grief
Tum bin, saajan, janavarii faravarii ban gaye me aur juun
ရှင်မရှိဘဲနဲ့ အချစ်ရယ် ဇန်နဝါရီ ဖေဖော်ဝါရီဟာလည်း မေ ဇွန်လိုပါပဲ
Without you, my love, January and February have become May and June
Ajii tumase bichha.dake ho gaye ham sanyaasii
မင်းနဲ့ ခွဲခြားရထဲက ကိုယ့်မှာ ရဟန်းတွေလို စောင့်စည်းရပါတယ်
Since separating from you, i living likeamonk
Khaa lete hain jo mil jaaye ruukhii suukhii baasii
ခြောက်ခြောက်ကပ်ကပ်နဲ့ ရရာ စားနေရတာပါပဲ
I eat what ever i get, dry or stale
Ajii luungii baandh, ke karein guzaaraa bhuul gaye pataluun
အခုဆို ကိုယ့်မှာ လုံချည်ပဲ ဝတ်နေရတယ်၊ ဘောင်းဘီတွေတောင် မရှိတော့ပါဘူး
I live my life by just wearingalongyi, I don't even have trousers anymore
Your thoughts torment me so